Onja hafanana | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Indraindray ny fotoana dia mitarika antsika mankany toe-javatra tafahoatra tsy hainay ny mitantana. Iray amin'izany ny onja hafanana, izay afaka mamarana ny ain'ny olona iray.
Amin'ity habaka ity dia afaka mahita ny zavatra rehetra ilainao ianao sorohy ny vokany tena lehibe izany dia mety hitarika antsika ho amin'ny fahafatesana. Hydration tsara, sorohy ny ora be sy ny lava sns. Manampy antsika hisoroka olana.
Tsy azontsika hadino fa ny onja hafanana, amin'ny ankapobeny, dia ampandrenesin'ny serivisy momba ny toetrandro ary afaka misoroka toe-javatra tafahoatra foana isika. Eto koa ianao dia afaka mankafy ny fampahalalana fototra hianarana foto-kevitra sy teny izay tsy haintsika indraindray ny dikan'izany.
Fampahalalana mifanohitra sy mahaliana.
Onja mafana Jona 2019
ny Portillo Alemanina hace 4 volana .
Fantatsika fa miaraka amin'ny fiakaran'ny maripana maneran-tany dia mitombo hatrany ny maripana isan-taona. Hany ka ny onja...
Ny onja hafanana mamaky ny firaketana any Espana: faritany voakasik'izany ary rehefa hifarana izy io
ny Emilio Garcia hace 11 volana .
Ny onja hafanana izay nahatratra 50 degre Celsius tany amin'ny faritra maro any Espana dia nandao antsika ...
ny Portillo Alemanina hace Taona 1 .
Rehefa miresaka momba ny toetr'andro isika dia misy karazana phenomena samihafa mety hitranga isan-taona ary misy ...
Ny mety hitrangan'ny afo saika manerana an'i Espana dia eo anelanelan'ny avo sy avo indrindra
ny Casale Claudi hace 5 taona .
Ny mari-pana avo indrindra izay nahatratra ny ankamaroan'ny firenena tamin'ny zoma 18 aogositra lasa teo, dia nampiakatra ho ...
Fahasamihafana eo amin'ny Sunstroke sy ny Heat Stroke, ny fomba hiarovantsika tena amin'izy ireo
Andro toy ny androany rehefa mifoha amin'ny vondrom-piarahamonina mizaka tena maro isika miaraka amin'ny fampandrenesana amin'ny mari-pana ambony, ara-drariny ...
Espana no firenena manana onja hafanana be indrindra any Eropa
ny Portillo Alemanina hace 5 taona .
Tsy ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao no samy mihetsika mitovy amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Espana dia iray amin'ny ...
Ny onjan'ny hafanana any Eropa dia mamela ny tendrombohitra Alpes tsy misy lanezy
ny Monica sanchez hace 5 taona .
Mafana ve? Tsy natao ho an'ny kely kokoa izany. Andro vitsy lasa izay tany amin'ny faritra maro any Espana sy Eropa ...
Ahoana ny fiatraikan'ny biby sy ny fiarovany ny tenany amin'ny hafanana?
Ambonin'ny ambaratonga mari-pana sasany dia sarotra kokoa amin'ny zavamananaina ny miasa. Manam-pahaizana avy amin'ny WWF (Fund ...
Ny onja mafana indrindra tany Shanghai tao anatin'ny 145 taona dia namono olona 4
Mandritra ny fahavaratra any amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao, ny mercury amin'ny thermometers dia miakatra amin'ny soatoavina avo indrindra, saingy rehefa ...
Ny hafanana ambony sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny taham-pahafatesana
Ny mari-pana ambony dia mahalana no miaraka amin'ny zavatra tsara rehetra. Izy ireo dia mety hiteraka trangan-javatra mahatsiravina, toy ny fiakaran'ny rivodoza ...
Inona no atao hoe heatwave?
Mandritra ny fahavaratra dia avo dia avo ny mari-pana amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao. Ity dia zavatra iray izay niheverantsika rehetra, ...